9-ka barnaamij ee ugufiican si aad u daawato kanaallada lacag la bixiyo 100% lacag la'aan | Androidsis
9-ka barnaamij ee ugufiican si aad u daawato 100% kanaal lacag la'aan ah
Telefishanku waa cunsur muhiim u ah nolosheena iyada oo ay ugu wacan tahay awood u yeelashada in aan cunno dhammaan noocyada maaddooyinka ah, ama telefishanka dhijitaalka ah ama socodka. Thanks to dhufto ee kala duwan maanta waxaan daawan karnaa filin, taxane, dokumenti ama kartoon aan u baahnayn carqalad oo aan doorano la la carte.
Thanks to teknolojiyadda iyo codsiyada, malaayiin isticmaale ayaa ku raaxeysan kara kanaal kasta iyada oo aan loo baahnayn adeeg dheeri ah. Qiyaas inaad ka daawanayso filimada wakhti kasta aaladdaada moobaylka ah oo xitaa si toos ah ugu gudbiya signalka telefishanka adigoon u baahan fiilooyin.
Maanta waxaan soo bandhigeynaa barnaamijyada ugufiican ee lagu daawan karo wadiiqooyinka lacag bixinta ee 100% bilaash ah kaas oo lagu arki karo nooc kasta oo ka kooban, oo ay ku jiraan mid ka mid ah waxyaabaha maanta la cuno, taas oo ah guud ahaan isboortiga. Waxay ku xirnaan doontaa qofka waxa uu ku arko xilligaas saxda ah oo kaliya dhowr jeer oo shaashado ah.
1 IPTV Xadka
3 Adiga Ciyaartoyga TV-ga
4 Ciyaaryahanka SU v1.2
5 Caqli xumo
6 MX Player
8 Dragons Dareen
9 Xarunta FreeFlix
IPTV Extreme waxaa loo yaqaanaa inuu yahay codsi Android ah oo lagu daawado TV, waxay ku shaqeysaa iyada oo loo marayo liistada kanaalka ee qaabka m3u, feyl siin doona dadka isticmaala tilmaamaha ay ku noolaan karaan baahinta. Liiska kanaallada ayaa is beddeli doona iyadoo kuxiran midka la doortay, waxaa jira kuwa badan oo la heli karo oo dhammaantood shaqeynaya maanta.
Codsiga wuxuu la jaan qaadayaa Google's Chromecast, si otomaatig ah ayuu u cusbooneysiiyaa hagaha TV-ga, wuxuu u duubaa barnaamijyada waqtiga dhabta ah wuxuuna leeyahay kantaroolka waalidka. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijku wuxuu ku darayaa suurtagalnimada in liisaska lagu soo daabaco mawduuc, gaar ahaan markay tahay kala-soocidda iyaga kooxo ahaan.
Qalabka IPTV ee ba'an ayaa ah bedelka ugu fiican ee ModBro, marka laga reebo dhammaanba ku darista liisaska m3u ma aha mid adag sida ay umuuqato. Ahaanshaha codsi bilaash ah waxay leedahay xayeysiis, inkasta oo kuwani laga reebay nooca la bixiyay ee lacag bixinta sanadlaha ah si loo cusbooneysiiyo softiweerka.
Waxay muddo dheer noqotay xarun warbaahin fara badan oo dhammaystiran markay timaado in la ciyaaro nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ay ka mid yihiin, oo ay ku jiraan liiska-soo-baxa dibedda ah. Adiga oo adeegsanaya waxyaalaha lagu daro waxaad arki doontaa kanaallo bilaash ah oo lacag la bixiyo wakhti kasta oo ka mid ah terminalkaaga iyo markiisa.
Kodi waa lagu rakibi karaa marka lagu daro taleefannada ku jira TV Box oo leh nidaamka Android, oo ah codsi dhammaystiran sida ciyaartoy dhammaan noocyada faylasha ah. Isticmaaluhu wuxuu la qabsan doonaa codsigan siduu u jecel yahay, maaddaama kanaallada si gooni ah loogu dari karo, samee liistada kuwa ugu cadcad iyo tallaabooyinka kale.
Barnaamijka Kodi waa lama huraan haddii aad rabto inaad awood u yeelato inaad aragto dhammaan noocyada wax ka kooban, ha ahaato filimo, taxane, dokumentiyo iyo xitaa YouTube toos ah. Waa mid ka mid ah kuwa ugu codka badan marka lagu daro haysashada in ka badan 10 milyan oo laga soo dejisto maanta aaladaha moobaylka. Ku rakibidda kanaalka waa fududahay in la sameeyo.
Developer: Aasaaska Kodi
Waxay la mid tahay labada kale codsi dhammaystiran oo lagu ciyaaro kanaallada DTT ee bilaashka ah sida kuwa si fiican u yaqaan ee dhufto ee lacag bixinta. Iyada oo aad awoodi doontid inaad ku sameyso dhammaan cayaaraha, filimada, taxanaha, taxanaha carruurta iyo feyl kasta oo shabakadda shabakadaha ah.
Adiga TV Player waxaad u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay keydsadaan waxyaabaha aan dooneyno inaan gadaal ka aragno ama ku darno kuwa ugu cadcad inay had iyo jeer gacanta ku hayaan. Ku dar hawsha wada hadalka si aad ula hadasho asxaabta iyo dadka aan kula kulmi doonno sheekada, laakiin waxay ku xirnaan doontaa qofka inuu awood u yeesho inuu ka jawaabo mid kasta oo ka mid ah farriimaha.
Codsiga adiga TV Player wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu awood u leeyahay inuu u diro waxyaabaha ku jira Chromecast ka Google oo ka ciyaar fiidiyow kasta TV-ga. Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo banaanka Play Store malaayiin qof oo ka soo degsaday barnaamijka degelkiisa rasmiga ah.
Download: Adiga Ciyaartoyga TV-ga
Ciyaaryahanka SU v1.2
Su Player v1.2 waxaan ku daawan karnaa wixii nuxur ah ee telefishanka si bilaash ah, sida filimada, isboortiga tooska ah, buugaagta, silsiladaha, anime iyo documentaries, iyo waxyaabo kale. Waxay ku habboon tahay taleefan kasta oo Android ah, kiniinno, TV Box, Amazon Fire TV, Chromecast iyo TVs oo marin u leh barnaamijyada.
Waxaad ubaahantahay OWLY GO! si aad u shaqeyso, oo ah qalab shaqeynaya oo arjigu ku taageerayo, tan awgeed waxay lagama maarmaan noqon doontaa in la galo bogga Facebook si loo sameeyo tallaabooyinka. Markaas waa inaad kala soo baxdo CIYAARTA GUUD Play Store si aad uhesho erayga sirta ah (gudaheeda ONE tab) si aad u gasho OWLY GO.
Iyada oo loo maro OWLY GO! waxaan marin u heli doonnaa boqolaal kanaal, dhamaantood waxaa amro qaybo kala duwan sida kuwa soo socda: Madadaalo, Shaleemo iyo taxane, Dhaqan, Caruur, Premium, Muusig, Cayaaraha, Wadamada, 24/7 kii ugu dambeeyayna waa in la taageero mashruuca la abuuray. Tijaabada kadib, waxaan dhihi karnaa waxay leedahay warbaahin xiiso badan.
Download: Ciyaaryahanka SU v1.2 | Owly GO!
Mid ka mid ah codsiyada heer sare ah, ee 2021 waxay sii wadaa inay u shaqeyso sidii ay ku shaqeyn jirtay 2020 mahadsanid adeegaha la heli karo. WisePlay waa fiidiyow fiidiyoow ah oo awood u leh akhrinta liisaska m3U, si aad u isticmaasho kaliya waa inaad nuqul ka sameysaa URL oo aad dhajisaa si aad u muujiso liiska kanaallada.
Ka dib markii aad soo dhoofiso, waxaad arki doontaa tabinta tooska ah ee kuwa ku jira liiskaas oo loo isticmaalay in lagu daawado DTT iyo kanaalada lacag la'aanta ah. WisePlay waxay leedahay interface fudud oo fudud, oo waxtar u leh taleefan kasta oo Android ah, laakiin sidoo kale laga heli karo TV Box, PC iyo Chromecast.
Ciyaar dhamaan noocyada feylasha fiidiyowga sida aac, avi, asf, amr, divx, flv, h264, hevc, m3u8, mkv, mov, mp3, mp4, mpg, mts, ogg, rm, rmvb, ts, vp9 iyo wmv, iyo sidoo kale http, https, mms, rtmp ama rtsp protocols. Waxaa laga heli karaa Play Store wuxuuna leeyahay ku dhowaad 5 milyan oo soo degsasho ah. Waxay ku jirtaa Isbaanishka oo u isticmaal arrin ku saabsan waqti yar u huridda.
Wiseplay: Ciyaaryahan Fiidiyow
Developer: Ciyaar xikmad leh
Sida WisePlay waxay u shaqeysaa sidii fiidiyoowWaxay sidoo kale aqbashaa liisaska aad ka daawan karto kanaallada adduunka oo dhan iyadoon xaddidnayn. MX Player wuxuu sameynayaa niche naftiisa, sidaas darteed waxay ku xiran tahay kuwa badan oo raadinaya fiidiyoow fiidiyoow ah iyo sidoo kale internetka.
MX Player waxaa ka mid ah interface cad oo muuqaal ah jaleecada hore, waxay sidoo kale ciyaari doontaa fiidiyowyadaas aad ku haysato taleefankaaga gacanta xilligan. Si aad ugu darto m3u ama xiriiriyeyaal kale, u gudub saddexda sadar Dhinaca bidix ee kore, dhagsii shabakada maxalliga ah, dhagsii badhanka "+" oo ku dar magaca ku xiga serverka, dhagsii Connect oo wuxuu tusi doonaa dhammaan kanaallada.
Waa codsi runtii aad loo yaqaanMaaddaama ay soo dejisay 500 milyan oo isticmaale adduunka oo dhan, sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan dhammaan xulashooyinka ay bixiso. MX Player wuxuu ku habboon yahay daawashada DTT iyo kanaalada lacag bixinta oo la mid ah WisePlay.
Developer: MX Media (hore u J2 Interactive)
Waa mid ka mid ah codsiyada in muddo ahba u soo fiicnaanayay si la yaab leh in lagu daro liis muhiim ah, dhammaantoodna laga dalbado dalal kala duwan. Isbaanishka kanaalada waa yar yihiin, laakiin horumariyaha ayaa ballanqaaday inuu si joogto ah u cusbooneysiiyo.
Ku dar dariiqyada DTT ee waddamada qaarkood, in kasta oo ugu fiican uu yahay liistada dhammaystiran ee kuwa la bixiyay, dhammaantood adigoon wax liis gareynin. Kraken TV waa mid ka mid ah xulashooyinka badan ee internetka iyo culeyska baahinta tooska ah wali ma qaan gaarin.
Isticmaaluhu wuxuu awoodi doonaa inuu kaydiyo kanaallada ugu cadcad inaad aragto inbadan inaad markasta gacanta ku hayso adigoon u baahnayn inaad mid mid u raadsato waddan kasta. Kraken TV wuxuu ikhtiyaar u leeyahay in lagu isticmaalo Isbaanishka marka aad furto, wuxuu kaloo ku darayaa xayeysiin lagu taageerayo shaqada soo-saareyaasha.
Download: Kraken tv
Waa ikhtiyaar la mid ah Kodi, WisePlay iyo MX Player, waxay ka faa'iideysaneysaa xiriiriyeyaasha dibedda inay ku ciyaaraan waxyaabaha tooska ah, in kasta oo ay sidoo kale akhrido faylasha qalabka. Isku xirnaanteeda awgeed waxay u muuqataa mid aad u yar, laakiin waxay u fulisaa dhammaan howlaha si habsami leh.
Dragons Feel waxay u baahan tahay in lagu cusbooneysiiyo nooc cusub markii aad rakibto, tan, u siiso otomaatig toos ah ka dibna raadi liisaska la heli karo. Si tan loo sameeyo, guji "+" oo gal mid ka mid ah kuwa badan oo laga heli karo internetka si ay u buuxiso liiska.
Waa fiidiyoow fiidiyoow ah oo la mid ah barnaamijyada IPTV, laakiin leh awoodda lagu ciyaaro dhammaan noocyada feylasha adigoo haysta koodhadh loo baahan yahay. Dragons Feel xilligan waxay ka baxsan tahay Play Store oo culeyskiisu waa 32 megabytes si loo awoodi karo in loo isticmaalo, xusuusnow in ilaha aan la garanayn loo kiciyo rakibiddiisa.
Download: Dragons Dareen
Codsi aan jeclaanay wuxuu ahaa FreeFlix HQ. Marka laga reebo shineemada, waxay leedahay taxane TV ah, Anime iyo TV-yada tooska loo soo sheegay ee kor ku xusan, halkaas oo kanaallada laga keeno.
Ku dar mid waa uun inaad gujisaa "Live TV", guji Add m3u File URL oo ku dheji iskuxirka si aad ugu shubto dhammaan telefishinnada. Waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran, marka laga reebo soo dejinta dhammaan fiidiyowyada si dhakhso leh. Waxay ku qoran tahay Isbaanish waxayna ka tagtaa ikhtiyaarka si loo badbaadiyo kanaalada ugu caansan.
Download: Xarunta FreeFlix
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 9-ka barnaamij ee ugufiican si aad u daawato 100% kanaal lacag la'aan ah
Sida loo dayactiro shaashadda taleefankaaga
6da barnaamij ee ugu wanaagsan ee tijaabada IQ ee loogu talagalay Android